OPPO သည်၎င်း၏ 10x optical zoom ကိုတရားဝင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Androidsis
OPPO သည်၎င်း၏ 10x optical zoom ကိုတရားဝင်တင်ခဲ့သည်
အက်ဒါဖာရီနို | | ဓာတ်ပုံ, UHI
လအနည်းငယ်အကြာ အဲဒါကိုကြော်ငြာခဲ့သည် OPPO သည် 10x optical zoom နည်းပညာကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည် အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် MWC 2019 အကြိုကာလတွင်ဤနည်းပညာကိုတင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဘာစီလိုနာတွင်ရှိပြီးတရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့နည်းပညာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလူသိများသည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က OPPO သည်ဤနည်းပညာကိုထုတ်လုပ်တော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်၌တည်၏။ ကြောင်းအကောင့်သို့ယူပြီး ပြီးသား MWC 2019 မှာတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တရားဝင်ကနေ့ရက်များသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိစေခြင်းငှါတူသောကြောင့်ကြည့်ရှုသည်။ ဒီနည်းပညာကနေဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်သလဲ
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ် ဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုတစ်ခုစီးရီးမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် hardware အသစ်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များထပ်မံပေါင်းစည်းခြင်းအပြင် zooming အတွေ့အကြုံသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ အမှတ်တံဆိပ်ကတိပေးထားတဲ့အတွေ့အကြုံကစမတ်ဖုန်းတွေမှာတွေ့ရတာနဲ့မတူဘူး။ OPPO အတွက်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။
ကျနော်တို့အရှုံးမပါဘဲအထိဆယ်အထိတိုးချဲ့ရှာပါ။ ဒါကစမတ်ဖုန်းထဲမှာမြင်ရမယ့်အရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်သူကရှိပါတယ်အရေးပါမှုသည်ကြီးလှ၏။ ပြီးတော့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာဘာစီလိုနာမှာ MWC 2019 မတိုင်မီကဒီအဖြစ်အပျက်မှာတရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကဒီနည်းပညာအကြောင်းငါတို့ကိုဘာပြောခဲ့လဲ။
OPPO ကမီးမောင်းထိုးပြချင်တယ် software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ပေါင်းစပ် ဤကိစ်စတှငျအဓိကအသှငျအပွငျအဖြစ်။ နယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးတွင်တိုးတက်မှုများကြောင့်ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်လာသည်။ ဤနည်းပညာကိုမိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ရှိသည့်ကိရိယာများကိုမှီခိုခဲ့သည်။
ဖုန်းရှိအာရုံခံစနစ်သည် periscope-shaped lens system ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ၆.၆ မီလီမီတာအထူအနည်းငယ်သာသာရှိခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည်၊ ၎င်းသည်ခွင့်ပြုသည် စမတ်ဖုန်းဟာဒီဇိုင်းပိုင်းအရပိုထူသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပွဲမှာသူတို့ပြောသလိုသူတို့အောင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနည်းပညာကိုသုံးဖို့အဓိကကျတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီစီမံကိန်းကဆက်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
Ultra-wide Angle vs 10x Lossless Zoom ??? #GetCloserWithOPPO? pic.twitter.com/iJUIfD95f5
- OPPO (@oppo) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2019
အခြားတစ်ဖက်တွင်, 120 ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 48 MP အဓိကအာရုံခံကိရိယာနှင့်တယ်လီဖုန်းအာရုံခံကိရိယာအပြင် ဤသည်ပေါင်းစပ် OPPO ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ် 16 မှ 160 မီလီမီတာအထိ focal အရှည်။ ၎င်းတွင် 10x optical zoom ရှိသည်ဟုတိုက်ရိုက်မဆိုလိုပါ။ ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာသည်အရည်အသွေးမပျောက်စေရန်သေချာသည့် software နှင့် hardware ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီနယ်ပယ်၌ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိစျေးကွက်ရှိစမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်အများစုတွင်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်areaရိယာတစ်ခု။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အဓိကကင်မရာ၊ ၄၈ MP နှင့်တယ်လီဖုန်းတို့ကိုပါအတည်ပြုခဲ့သည်။ OIS နှင့်အတူ optical တည်ငြိမ်နှင့်အတူရောက်ရှိ။ ကျယ်ပြန့် - ထောင့်အာရုံခံကိရိယာကမပါဘူးပေမယ့်။ သို့သော် OPPO မှပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ ကြောင့်ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားများကြောင့်ကင်မရာများနှင့်အတူယူလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤနည်းပညာကိုဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်အသုံးပြုမည့်ပထမဆုံး OPPO စမတ်ဖုန်းများကိုစောင့်ဆိုင်းရန်သာကျန်တော့သည်။ အဲဒါပြောတာ ပထမတစ်ခုက F11 Pro ဖြစ်နိုင်တယ်, အရာကနေကျနော်တို့ကဒီရက်သတ္တပတ်အများအပြားပေါက်ကြားရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှတရားဝင်အတည်ပြုချက်မရသေးသော်လည်းမကြာမီဈေးကွက်သို့ရောက်သင့်သောပုံစံ။ ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည် ၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်များဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ် ဒီ 10x optical zoom ကိုရှိသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းမပေးသေးဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ဓာတ်ပုံ » OPPO သည်၎င်း၏ 10x optical zoom ကိုတရားဝင်တင်ခဲ့သည်
Idle စူပါမားကတ် Tycoon ရှိစူပါမားကတ်လုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်ပါ
Huawei ၏ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းကို Mate X [ပိုစတာ] ဟုခေါ်သည်။